10 Torohevitra: Mijanona amin'ny endrika nefa mandritra ny dia | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Torohevitra: Mijanona amin'ny endrika nefa mandritra ny dia
10 Torohevitra: Mijanona amin'ny endrika nefa mandritra ny dia
(Last Nohavaozina: 13/08/2021)
Ny fijanonana amin'ny endriny mandritra ny dia dia tsy misy fisalasalana fanamby. Sakafo eo foana ny sakafo. Nifangaro taminà fiatoana amin'ny fanazaran-tena fanazaran-tena izay matetika mitarika amin'ny fianjeran'ilay sarety ara-batana. Ahoana no fomba hijanonan'ny iray mitoetra mandritra ny dia? Tsy sarotra araka ny eritreretinao. Mifikitra fotsiny amin'ny fitsipika vitsivitsy vitsivitsy, Mampiasà hery, ary afaka hody ianao ao amin'io fahasalamana lehibe io izay nanomboka ny fialantsasanao.
Train Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Tranonkala tapakila mora indrindra Eto amin'izao tontolo izao.
Mandehana araka izay tratry ny herinao mba hitoerana
Na dia fampiasana fitateram-bahoaka dia toa ny drafitra mora indrindra indrindra, andramo ny mandeha. Ny halavirana fohy dia lehibe ho an'ireo tsy tena milamina, na dia betsaka aza ny ataonao, arakaraka ny maha-ara-batana anao mandritra ny dia. Ny fandehanana an-tongotra lavitra dia afaka manisy fahasamihafana rehetra rehefa mijanona amin'ny endrika milamina rehefa mandeha ho an'ireo izay efa tena salama. Eritrereto ny hidina amin'ny bisy na taxi-be anao vitsivitsy, mba hahafahanao mandeha amin'ny ambiny. Lamasinina, mazava ho azy, fomba tsara ihany koa hivezivezena fa tsy avy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena iray, fa isan-tanàna sy ao an-tanàna. Mitsambikina hidina kely amin'ny fiaran-dalanao mandritra ny fotoana fohy, ary raiso ireo tranokala sy feo misy ny toerana fialan-tsasatrao mba hampitomboana ny fahafahanao mijanona amin'ny endrika rehefa mandeha.
Tapakila Milan mankany Roma
Tapakila Florence ho any Roma
Tapakila Pisa ho any Roma
Tapakila Naples ho any Roma
Fonosoy ny mahitsy tsara
Raha mikasa ny hijanona amin'ny endriny ianao rehefa mandeha dia miomana handeha amin'ny hazakazaka, na ny fitsangantsanganana, na ny bisikileta aza dia tokony ho azonao antoka fa manana fitaovana tsara ianao. Ataovy ao an-tsaina izany mandritra ny fonosanao. Raha tsy maintsy misafidy kiraro marevaka hafa ianao na kiraro misy anao, amboary ny sneakers. Tsy hisy zavatra ratsy kokoa noho ny mankany amin'ny toerana mahafinaritra, nahatsapa fa tena TONGA iANA, ary tsy afaka manao satria navelanao tany an-trano ilay milina mety. Ny mifoha maraina sy handeha ho jog dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana. Alohan'ny handry ny olon-drehetra, milamina sy tsara izao tontolo izao. Tsy ho vitanao io amin'ny pataloha jeans sy baoty.
Tapakila Zurich To Bern
Tapakila Geneva To Bern
Tapakila mifampitohy To Bern
Tapakila Zurich mankany Hamburg
Miampy 15 Minitra Fitoerana Mijanona Ao Shape mandritra ny dia
Ny fijanona amin'ny endriny mandritra ny dia mandeha dia manao fanatanjahan-tena ihany. Tsy afaka manantena ny hihazona ny hozatrao sy ny fahaizanao ianao rehefa mandeha raha mihinana sakafo be ianao, misotro zava-pisotro betsaka, ary aza manao workout. Ianao ihany no ilainao 15 minitra isa-maraina mba hahita fakana asa mini. Raha ao amin'ny faritra voajanahary toy ny tora-pasika ianao, mivoaha dieny mbola tsy dia be atao loatra, ary manao fampiofanana yoga na tanjaka amin'ny fasika. Azo tanterahina miaraka amin'ny hazakazaka ny kardio, fitsangantsanganana, na milomano haingana. YouTube dia manana horonantsary mahafinaritra maro miaraka amin'ny hevitra fohy, Fanatanjahan-tena miorina amin'ny fialantsasatra hitazomana sy hanatsarana ny fahasalamana mandritra ny dia an-tongotra. Aza manandrana mihanaka ny hariva, satria hisy fiantraikany amin'ny fiotazana maraina ataonao izany ary amin'ny farany ny hatsaran'ny endrika ataonao mandritra ny dia.
Brussel mankany Bruges tapakila
Tapakila Antwerp mankany Bruges
Brussels mankany Vienne tapakila
Tapakila Ghent mankany Bruges
Mijanòna raha mivezivezy amin'ny sakafo ara-pahasalamana
matsiro, ny croissant buttery sy ny asa tsara hafa dia mety hialona aminao avy ao ambadiky ny mpifehy, Fa ny tsara kosa dia ilaina hatrany ny mihazona hery am-pahamendrehana. Sakafo mahasalama, amin'ny lafiny rehetra, fa aza manety. Makà voankazo vitsivitsy ho an'ny sakafo maraina, sy salady ho an'ny sakafo antoandro hanampy anao amin'ny endriny maharitra mandritra ny dia. That way you have kept your calories low enough to be able to indulge a bit in a dinner.
Tapakila Amsterdam mankany London
Tapakila Paris mankany London
Tapakila Berlin mankany London
Brussels mankany tapakila London
Mijanona am-bava mandritra ny dia Amin'ny alàlan'ny fahazoana tohatra
Raha mijanona amin'ny hotely misy gorodona maro ianao, manana fahafahana tonga lafatra ianao! Raha tokony handray fiakarana, maka ny tohatra! Ity fanovana tsotra ity dia hanana kardio be dia be ao anatin'ny isan'andro, ary amboary anao amin'ny dia lavitra sy mahasalama kokoa. Raha tsy manana tohatra ianao na sidina iray monja, mitadiava sasany ao amin'ny faritra akaiky anao ary mihazakazaka miakatra sy midina azy ireo imbetsaka hanampy amin'ny fijanonana amin'ny endriny rehefa mandeha.
Dusseldorf mankany Munich tapakila
Tapakila Dresden mankany Munich
Tapakila Paris mankany Munich
Tapakila Bonn mankany Munich
Mitaingina bisikileta hijanona am-bava eo am-pandehanana
Toy izany koa no nanoloranay anao hoe mandeha fa tsy mitondra bus, andramo manofa bisikileta fa tsy hisambotra fitaterana. Firenena maro no hanana bisikileta azo amidy. Mitondrà lamasinina akaikin'ny toerana alehanao, ary avy eo dia mandeha bisikileta hoentina eny an-dalana. Rehefa te hiverina ianao, fihodinana tsotra fotsiny mankany amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary avelao ny bisikilanao hitanao, tsara ny mitoetra tsara endrika rehefa mandeha!
Frankfurt mankany Berlin tapakila
Tapakila Copenhagen mankany Berlin
Tapakila Hanover any Berlin
Tapakila Hamburg ho any Berlin
Zahao ny fiaraha-mientana eo an-toerana ary mijanòna amin'ny bobongolo mandritra ny dia
Firenena maro no nanenjika ny tanàna ao an-tanàna. Yoga na calisthenics amin'ny valan-javaboary na fitsangantsanganana voalamina matetika misy. Midira amin'ireo hetsika ireo mba hitoetra tsara amin'ny endriny mandritra ny dia. CrossFit dia tranga iray manerantany izay manatsara ny fahasalamana, dia makà fotoana kely amin'ny fandaharam-potoana mba hiaraka amin'ny kilasy, ao anatiny na ivelany. Ny mpitari-dalana na ny concierge anao eo an-toerana dia tokony ho afaka hanondro anao ny làlana tsara ho an'ireo.
Tapakila Amsterdam mankany Paris
Tapakila London mankany Paris
Tiket ny tapakila Rotterdam mankany Paris
Brussels mankany Paris tapakila
Ampiasao ny fiaran-dalamby sy seranam-piara-manidina rehefa mandeha tongotra
Mahafinaritra toy ny dia mandeha amin'ny lamasinina, tsy misy izany be loatra izany hanaovana fanatanjahan-tena raha mihetsika ianao. Toy izany koa amin'ny fiaramanidina. Raha miandry ny sidinao na lamasinina ianao, Makà fotoana handrindrana am-peo vitsivitsy ary mandehandeha manodidina ilay terminal mba hanampiana amin'ny endriny mivezivezy mandritra ny dia. Ataovy azo antoka tsara aloha ny entanao, na izany aza! Avelao hiatrika foana ilay olona itokisanao. Rehefa mandeha ianao, ampidiro ny kozatra sasantsasany mankamin'ny fitsangantsanganana. Mety ho mahatsikaiky ianao, fa ny vatanao kosa dia hisaotra anao any aoriana. Ny fijanonana amin'ny endriny mandritra ny dia dia mitaky ny fotoana rehetra manolotra azy. Soraty eto amin'ny Internet izao ny tapakilan'ny lamasininao, ary omeo fotoana manokana hampiasana ny vokatra mba hijanonana ho tsara endrika!
Tapakila Milan a Venice
Padua mankany tapakila Venice
Tapakila Bologna mankany Venice
Roma mankany amin'ny tapakilan'i Venice
Fonosoy ny fatran'ny fahatanjahanao hitoerana amin'ny bika mandritra ny dia
Ny tariby fanatanjahan-tena dia maivana, mora entina ary fomba tsara hijanona kely diany mandritra ny dia. Azonao apetraka ao amin'ny efitranonao ireo, ary manamboatra circuit mini-gym amin'ny toerana mety indrindra. Manaova fotoana isan'andro hanaovana andiany iray na dimy amin'ny faritry ny fizahanao, ary tsy nahatsiaro ho ratsy loatra ianao tamin'ny fihinanana ny matsiro matsiro rehetra.
Tapakila Salzburg mankany Vienna
Tapakila Munich mankany Vienna
Tapakila Graz mankany Vienna
Prague mankany Vienne tapakila
Aza fady ny alikaolao
Ny fananana io akoho io eo amoron'ny dobo, na mahafinaritra labiera ao amin'ny pub foana. Ny fihoarana azy io dia hiteraka fihenan'ny fitaizanao. Tsy noho ny siramamy ihany fa ny tsy fisian'ny antony manentana ny ampitso ihany. Asio zava-pisotro hafahafa raha maniry ianao, fa andramo hitazomana farafaharatsiny. Aza adino fa ny sotro mamy mafana dia tena be kaloria, toy ny labiera sy divay fotsy mihitsy aza. Ny fiasana azy ireo hanampy azy amin'ny endriny mitoetra mandritra ny fitsangatsanganana dia hahatonga ny fanazaran-tena nomaninao ho sarotra kokoa.
Tapakila Nuremberg mankany Prague
Tapakila Munich mankany Prague
Tapakila Berlin mankany Prague
Tapakila Vienna mankany Prague
Ny fialan-tsasatra dia mahafinaritra fotsiny amin'ny ankamaroan'ny tranga. Io dia mety ho, na izany aza, manelingelina tanteraka ny fitondran-tena rehetra. Ny fijanonana amin'ny endriny mandritra ny dia mandeha dia mifikitra amin'ny fandaharan'asa fihinana mahasalama ary manao fanatanjahantena be dia be isaky ny mahazo. Aza adino ny hametra ny fisotroana toaka. Mifidiana Save A Train, tianay ny hanampy anao hankafy ny dia!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Torohevitra: Mijanona amin'ny endrika nefa mandritra ny dia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-staying-shape-traveling%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny es ho fr na nl sy fiteny maro voafidinao.
Tips Fa mpitety Eoropa irery By Train
Top 5 Cities divay In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
Ny zavatra tsara indrindra atao, Londres sy ny fomba ahatongavana any
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel UK